Izimpawu ze-25 Ungaba Nenkinga Ukubhuloga | Martech Zone
NgoMgqibelo, Ephreli 14, 2007 NgoMgqibelo, ngoFebhuwari 18, 2017 Douglas Karr
Eshukunyiswe Okuthunyelwe okumnandi kweBittBox, Nginqume ukubhala okwami ​​ngeposi mayelana nenkinga yami yokubhuloga. Nazi izimpawu zami ezingama-25 zokuthi ungaba nenkinga yokubhuloga.
Abangani bakho abasondelene nabo bazi indlela elula yokuxhumana nawe ukuthumela amazwana.
Uhlela kabusha igumbi lakho lokuphumula ukuze ukwazi ukufinyelela kangcono kukhompyutha.
Ukuze uphendule imibuzo ethile, kwesinye isikhathi kufanele useshe ibhulogi yakho.
Ubhalela okuthunyelwe emndenini wakho esikhundleni sokukhuluma nawo.
Ukhokha isikweletu sakho seDSL noma seCable ngaphambi kokuqasha noma ukubambisa ngempahla yakho.
Awusazi isikhumbuzo sakho kodwa uyazi owakho Technorati isikhundla.
Ukuhlanza ikhibhodi yakho kuzohlinzeka abacwaningi be-forensic ngalokho obenakho ngesidlo sakusihlwa ezinyangeni eziyisithupha ezidlule.
Lapho ungakwazi ukuthola ukuthi ungayiguqula kanjani itimu yakho, ubhala eyakho I-WordPress Plugin.
Uthole ukuthi u-Anna Nicole Smith ushonele online.
Ukhululiwe ngesici sokulondolozwa okuzenzakalelayo seWordPress 2.1 ngoba ekugcineni ungathatha amakhefu okugezela ngenkathi uthumela.
Ubamba amabhulogi wabangani, umndeni, futhi ozakwabo.
Uthenga amagama wesizinda ngezipho.
Wena babe a okuningi of abangane ukuthi uke ungalokothi empeleni wahlangana noma wakhuluma kuya in real Ukuphila.
Uyaqonda ama-akhronimi afana I-IMHO
Ucela i- Herman Miller I-Aeron yosuku lwakho lokuzalwa.
Uzithola usufuna i iPhone noma ungakaze ube neMac empilweni yakho.
Lapho ubuzwa ukuthi ufunani ngesidlo sakusihlwa, uncoma a yokudlela eVancouver kusuka kuJohn Chow - kepha uhlala e-Indiana.
Noma iyiphi ibhulogi ngaphandle kwamazwana iyamunya… Ibhulogi kaSeth.
Uyazi Ze kuyahlekisa, Hugh udweba amahlaya amahle kumakhadi ebhizinisi, futhi Mark wayenenhlanhla ngebhizinisi lakhe lokuqala.
Uyazi ukuthi noma yikuphi ukuphawula okuvela kusayithi eligcina ngo- “info” kungogaxekile kwebhulogi.
Ubheke itimu entsha ngaphezu kokuthuthela ekhaya lakho elisha.
Unenkinga yokulala ngaphandle kokuthumela.
Uhlala kuphela emahhotela nge-broadband noma nge-Starbucks ngaphakathi kwamabhulokhi ama-3.
Uzikhomba njenge-blogger kunokuba wenze umsebenzi uqobo oziphilisa ngawo.
Uku-oda ukudla kwakusihlwa kufaka i-ctrl-t nokungena ngemvume ku- Papa John's.
Ngo-Apr 14, i-2007 ku-8: i-18 PM
Uhlu oluhehayo kepha ngithole amaphutha ambalwa.
Iphutha lokuqala liku # 13 njengoba noma singakaze sihlangane mathupha, sikhulume kaningi ngezwi.
# 16, empeleni usunayo iMac, ngakho-ke lokhu akusebenzi kuwe 🙂
Kepha i- # 20, empeleni ngithole imibono evela kumasayithi e-.info empeleni ayengebona ugaxekile webhulogi…
# 23, hhayi iphutha kepha ngithole amanye amahhotela ukuthi abe ne-broadband futhi asebenzise i-Starbucks endaweni yokwamukela izivakashi noma endaweni abanamadonathi amahhala 🙂
Ngo-Apr 14, i-2007 ku-8: i-19 PM
Iphutha? Ukubhuqa! Udinga amahlaya kangcono, Sean. 🙂
Ngo-Apr 14, i-2007 ku-8: i-28 PM
Nginamahlaya uDoug… hehe… ama-donuts amahhala nama-Starbucks emshweni ofanayo? Manje manje, lokho kuyahlekisa 🙂
Ngo-Apr 14, i-2007 ku-9: i-07 PM
Phew! Ngiyabonga ngesixhumanisi esiku # 13, noma ngifanelekela abanye.
Unecala? Ngenkathi lokhu kuvela ekuphakeleni kwami ​​- ngacabanga, “eh-oh… sengibanjiwe.” Ngemuva kokufunda okuthunyelwe, ubungazi sonke isikhathi :-)
Siyabonga ngokuhleka (nobungani).
Ngo-Apr 14, i-2007 ku-9: i-35 PM
Kuyadabukisa ukuthi zingaki zalezi zinto ezisebenza empilweni yami…
Ngo-Apr 14, i-2007 ku-10: i-16 PM
# 26: Ubhala uhlu ngokukhethekile ku-Link-bait amanye ama-blogger ekuxhumaneni nawe 🙂
Ngo-Apr 14, i-2007 ku-10: i-17 PM
Vele, uKiltak! 🙂
Ngo-Apr 15, i-2007 ku-2: 00 AM
Abangu-9 kwabangu-25 kimi… kusamele kube nethemba.
Uzithola ufuna i-iPhone yize ungakaze ube ne-Mac empilweni yakho.
Lokho kuncane ngokuba yi-blogoman nokuningi ngokulunywa yi-Applemarketingbug enhle. (Ngokuyinhloko, njalo lapho uSteve Jobs enza isethulo, wena nje babe ukuba nayo. Okwabahleli: namuhla i-Apple izodalula i-Final Cut Pro entsha. 🙂
# 27 uhlola ibhulogi yakho ukuthola imibono kaningi kunefoni yakho
# 28 uyazi ukuthi yiluphi uhlobo lwe-Word Press olungamanje kakhulu. Futhi uma usebenzisa ibhulogi yakho kunguqulo endala, ungaphikisana imizuzu yokuthi kungani…
Yiba nesonto elihle, umngane wami ongokoqobo 🙂
* Ngihlekela phezulu, ngizibuza ukuthi mingaki yale mithetho esebenza kimi
Ngo-Apr 15, i-2007 ku-9: 08 AM
# 27 iyiqiniso nakimi! Kuyahlekisa kakhulu!
Ngo-Apr 15, i-2007 ku-2: 07 AM
# 29 ubonakala njengomunye wabaphawuli abaphambili kuma-blog amaningi.
Ngo-Apr 15, i-2007 ku-3: 16 AM
Muhle uDoug! Nayi enye yakho: Izindlela eziyi-10 zokwazi uma uyi-Blogaholic.
Ngo-Apr 15, i-2007 ku-9: 10 AM
Bloke - kuhle lokho! Futhi ngihleli lapha ngifunda imibono ngaphambi kokwenza ikhofi yami yasekuseni… oy!
Ngo-Apr 15, i-2007 ku-2: 20 AM
# 30 okuthunyelwe okuningi noma imibono ifika ngesikhathi esiqala ngo-0
# 31 Usabhalisile kokuphakelayo kwe-RSS ngemuva kwezinyanga ezintathu ungasebenzi. 🙂
Ngo-Apr 15, i-2007 ku-6: 07 AM
Eziningi zazo zisebenza kimi, ibheji engiligqoka ngokuziqhenya.
Ngo-Apr 15, i-2007 ku-9: 59 AM
Nginecala kakhulu cishe nge-1/3 yalezi! Ingabe lukhona uhlelo lwesinyathelo se-12 engingabhalisela kulo?
Ngo-Apr 15, i-2007 ku-12: i-10 PM
@Thor: Empeleni, uDoug usohlelweni lokwakha uhlelo lwezinyathelo eziyi-12 ngalokhu kepha ngefomu le-plugin ye-WordPress ngakho-ke kuzoba lula kithina sonke esiyimilutha 🙂
Ngo-Apr 15, i-2007 ku-12: i-14 PM
Uhlu Oluhle Doug, angikholwa ukuthi kukhona ikhamera endlini yami! Ngiyahlolwa ngiyakutshela!
Ngo-Apr 15, i-2007 ku-2: i-51 PM
I-Hilarious, uDoug. Kungaba mnandi kakhulu uma ingashayi isondele kakhulu ekhaya.
Ngo-Apr 16, i-2007 ku-12: i-44 PM
Angikubhali nje lokho, nginguLOL ngempela !!!
Ngo-Apr 18, i-2007 ku-4: 25 AM
Ngiphasile. Izilishumi nantathu kwezingu-25 azisebenzi kimi 🙂
Nov 16, 2009 ngo-5: 41 AM
Bengifuna isayithi elisho okuningi ngokubhuloga futhi ngibone leli sayithi, ngiyakujabulela kakhulu ukufunda izinkinga ezingama-25 futhi ngizozama ukugwema leyo nkinga futhi funa ngibone ukuthi kuzokwenzekani ..